Ndị ọkachamara na Semalt kọwara otú e si eji nyocha weebụ
Ndị nyocha weebụ taa na-agbalị ịchọta ọtụtụ data na weebụsaịtị dị iche iche iji mezue ọrụ ha ma bia na nchoputa di nma nke puru inyere ha aka imeziwanye ulo oru ha. Iji mee nke ahụ, ha na-eji ihe nchọgharị weebụ . Ọ bụ usoro dị ọhụrụ ma dị egwu, nke na-enyere ha aka ịchọta ozi site na ibe weebụ dị iche iche na akpaghị aka - business logo design maker. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịchọta nnukwu ọdụm nke data dị mkpa n'enweghị ọrụ iji aka ha rụọ ọrụ niile. Ndị na-esonụ bụ ezigbo nduzi maka otu ha ga-esi jiri ntanetị weebụ.
Otu esi ewepu saịtị
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwechapụ nkọwa kọntaktị ma ọ bụ ahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ edere, ha kwesịrị iji ihe nchọgharị weebụ. Site n'iji ntanetị weebụ, ọrụ a na-eme site na ịmepụta koodu (a makwaara dịka 'scraper'). Ihe nchacha a bụ ọrụ niile maka ndị nyocha weebụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-enyocha ozi niile dị mkpa ndị ọrụ chọrọ ịchọta n'ime akwụkwọ ọtụtụ ma gbanwee ha na nkọwa ndị akọwapụtara. Ihe ndekọ a nwere ike ịbụ n'ụdị ihe oyiyi, ederede, ngwaahịa, ozi ịntanetị, adreesị ekwentị, ahịa na ihe ndị ọzọ.
Ihe Ndị Dị Mkpa Iji Mara
Ndị chọrọ ịchọta ebe nrụọrụ weebụ chọrọ ịma na ibe weebụ ọ bụla dị iche ma nwee usoro na ọnọdụ ya. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ weebụsaịtị na-agbanwerịrị mgbanwe ha site n'oge ruo n'oge. Idebe mgbanwe ndị a niile chọrọ mgbalị dị ukwuu na ọtụtụ awa ọrụ. Ndị na-enyocha weebụ ga-achọkwa ịkpachapụ anya ịgbaso iwu. Ma ọ bụghị ya, ha nwere ike inwe nsogbu. Ime otú ahụ, ha nwere ike idetuo ọdịnaya n'ime minit ole na ole na weebụsaịtị dị iche iche na Intaneti.
Chọta ozi niile dị mkpa
nchịkọta weebụ na-enye ụfọdụ ọrụ dị irè maka azụmahịa na ndị mmadụ n'otu n'otu iji mee nchọpụta ahịa.Ngwaọrụ ndị a pụrụ inyere ha aka inweta data niile dị mkpa maka ọrụ ha, nyochaa ha nke ọma ma nweta ihe ha na-achọ. N'ihi ya, ha nwere ike imeri ndị na-asọmpi ha nwere ike ịkwalite ahịa ha n'oge ọ bụla. Site n'iji ngwá ọrụ ntanetị weebụ, ha nwere ike ịchekwa listi dị iche iche nke ndị na-ere ma ọ bụ ndị na-eweta ngwaahịa, yana ngwaahịa na ndị ọzọ echekwara na faịlụ.
Site na iji ngwaọrụ ndị a na-ekpuchi , ndị na-enyocha weebụ nwere ike ibudata ọtụtụ ngwọta iji gụọ offline. Nke a nwere ike ịchekwa ha ọtụtụ oge, mgbe ahụ, ha nwere ike ịgụ ha wee nyochaa nkasi obi nke kọmputa ha site na ịpị otu bọtịnụ. Ọ na-azoputa ha awa nke na-agbalị iji aka gị chọta data ndị a nile. N'ihi nke a, ha anaghị adabere na njikọ njikọ weebụ, dịka ha nwere ike ịgụ ihe onwunwe ha n'ọdịnihu.
Chọta ndị nwere ike ịnweta
Ọtụtụ ndị isi taa na-anwa ịchọta ndị mmeri ndị ọkachamara ịbanye n'òtù ha ma ọ bụ ndị na-achọ ọrụ ndị na-agbalị ịchọta ndị mmadụ maka ohere ọ bụla. Mgbe ha na-eji ngwaọrụ ndị a, ha nwere ike ịchọta ndị ha chọrọ.
Chọta Ahịa Ahịa Ahịa Ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ha na-achọ ileba anya ahịa nke ụfọdụ ngwaahịa, site n'iji web scraping ha nwere ike ịchọta ha na akpaghị aka. Nchịkọta weebụ nwere ike inyere ha aka nyochaa ọnụahịa niile ha chọrọ site na ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ ahịa n'ịntanetị.